Intl community is watching very carefully. They know who is right or wrong.
Mar 31, 2014 02:37 AM
သာသနာ့အလံထူထူချင်း NGO တာဝန်ခံက ဖြုတ်ချတာလား။ ရက်ကြာမှ (သန်းခေါင်စာရင်းကောက်မယ့်ရက်နီးမှ)
ဖြုတ်ချတာလား။ (အဖြေက ၂ မျိုး ထွက်မယ် လေ။)
Mar 30, 2014 01:11 PM
Dear RFA, She dresses the Buddhist Religious Flag. She did wrong behavior. This is zero-tolerance for Buddhist people!
Mar 29, 2014 04:36 PM
Malteser International ရုံးတာဝန်ရှိသူ အမျိုးသမီးကို အရေးမယူကြတော့ဘူးလား။ NGO တာဝန်ခံတွေဟာ သူတော်စင်တွေမဟုတ်တာကြောင့် သူတို့မှာ ဘက်လိုက်မှု ၊ အထင်သေးမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဆူပူနေတဲ့“အုပ်စု”ကိုလည်း ဖေါ်ထုတ်ပေးပါ။
Mar 29, 2014 01:57 PM